Amazon Echo Show 10, shaashad, cod iyo hal-abuurnimo, ma u qalantaa? | Wararka Gadget
Amazon Echo Show 10, shaashad, cod iyo hal-abuurnimo, ma u qalantaa?
Miguel Hernández | 11/06/2021 10:00 | General, Reviews
Amazon wuxuu sii wadaa inuu ka shaqeeyo keenista qalabkiisa Alexa gurigeenna sida ugu fudud ee suurtogalka ah, kuwa mas'uulka ka ah bixinta suurtagalnimada abuuritaanka guri ku xiran qiime soo gal iyo awoodo laga filan karo tikniyoolajiyadda hadda jirta.
Echo Show 10 Tani waa mid ka mid ah waxyaabihii ugu dambeeyay oo aan shaki ku jirin kan ugu xiisaha badan marka la eego liiska shirkadda oo dhameystiran. Waxaan dooneynaa inaan si qoto dheer u falanqeyno Amazon Echo Show 10 cusub ee shirkadda Jeff Bezos oo aan aragno sida ay wax u qabato, Na raadi annaga sidaasna waad ku ogaan doontaa haddii ay runti u qalanto ama aanad helin midkood.
3 Alexa wuu kula socon doonaa meel kasta
4 Shaashad iyo cod
5 Adeegso khibrad
6 Faahfaahinta qandaraasyada
Munaasabaddan awgeed, Amazon waxay dooratay naqshad naqshad leh oo hal abuur leh, in kasta oo xaqiiqda ah in illaa iyo hadda afhayeenku uu ku sugnaa xagga dambe ee shaashadda si loo kordhiyo, haddana shaashadda iyo af-hayeenka labadaba si madax-bannaan baa loo habeeyay laakiin waa la isku dhafan yahay. Codbaahiyaha wuxuu ku yaalaa xaga dambe, gebi ahaanba dhululub, waxaa ku daboolan naylon midabada ay bixiso shirkada Waqooyiga Ameerika. Dhinaceeda, shaashadu waxay leedahay gacan la dhaqaajin karo jihada toosan oo qaban doonta guddiga LCD. Haddii ay ku qanciso, qiimaheedu waa ilaa 249,99 euro oo ah Amazon.
Midabada la heli karo: Anthracite
Guddigan LCD wuxuu noqon doonaa xarunta neerfaha ee Amazon Echo Show 10 leh kamarad ku taal aagga midigta sare, halka birta kore aan ku yeelan doonno badhanka «aamus» iyo badhamada xakameynaya mugga afhayeenka. Guddigan 10-inji ah waa mid caan ah, laakiin sida had iyo jeer dhacda badeecadahan heerka-gala ee shirkadda Jeff Bezos, caagagga matte-ka ah ayaa u badan. Faa'iido xiiso leh, nidaamka qaabeynta waxaan isku hagaajin doonnaa dhaqdhaqaaqa shaashadda, taasina waa mid ka mid ah qodobbada ugu casrisan ee wax soo saarka iyo inaan si faahfaahsan hoos ugu sheegi doonno.
Marka la eego cabirka iyo culeyska, waxaan helnaa qalab aad u culus, waxaan heysanaa 2,5 Kiilo garaam oo aan dareemeyno wax ka badan sanduuqa inuu imanayo. Qiyaasta, waxaan leenahay 251 x 230 x 172 milimitir, in kasta oo ay umuuqato "caan", xaqiiqadu waxay tahay in nashqadeynta ay ka caawineyso inaysan aad u boodin inkasta oo ay 10 inji oo wareeg ah oo wareeg ah ay laalaaban tahay.
Qalabku wuxuu leeyahay isku xirnaanta wireless WiFi ac oo leh tikniyoolajiyadda MIMO iyo hab maamuuska A2DP iyo AVRCP, si kastaba ha noqotee, asal ahaan waxaan leenahay kiniiniyada Amazon Fire "oo lagu dhejiyay" afhayeenka. Ku dheji shaashadda processor-ka MediaTek 8113 Iyadoo la adeegsanayo processor labaad oo aanan garanaynin astaamaha farsamada, taas oo Amazon ay ku qeexeyso AZ1 Neura Edge, waxaan qiyaaseynaa in diirada la saaray waxqabadka Alexa.
10 MP kamarad leh nidaam quful farsamo
2.1 nidaamka rikoodhada
2x - 1 ″ Tweeter
1x - 3 ″ Woofer
Waxaa ku jira adabtarada korantada 30W ee leh dekedda AC
Waxaan leenahay hab maamuuska Zigbee loogu talagalay gurigeenna ku xiran iyo dareeraha iftiinka, sida ku dhacda kuwa ku hadla shaashadda kale ee shirkadda Mareykanka. Waa inaan ka hadalnaa matoorkeeda burush la'aanta leh wareegga 180º taas oo u oggolaan doonta inay naga raacdo kamaradda qalabka. Sidoo kale ma hayno xog ku saabsan RAM ama keydinta gudaha qalabka.
Alexa wuu kula socon doonaa meel kasta
Qaabeynta waxaan dhigeynaa xagasha wareegga iyo meesha aaladda si markaa, sidaan horey u sheegney, ay na raacdo inta aan la hadlayno ama wax qabanayno. Tani waxay si gaar ah u xiiso badan tahay markii, tusaale ahaan, aan ku jirno jikada oo aan dooneyno inaan diyaarinno, ama aan daawaneyno fiidiyowgeena gaarka ah iyada oo aan dhibaato badani jirin. Shaki la'aan, waxay umuuqataa guul dhab ah hadaan tixgalino inay tani noqon karto mid kamid ah qodobada ugu daciifsan ee Echo Show hore, sidaa darteed wax dhibaato ah kuma qabno xaglaha daawashada.
Sidoo kale, waxaan leenahay taageero taas ayaa noo oggolaan doonta inaan si toos ah u hagaajinno xagalka muuqaalka, aan badnayn, laakiin ku filan si looga dhigo sida ugu habboon ee suurtogalka ah in la isticmaalo. Shaashadu si fiican ayey uga jawaabtaa oo awoodda dhalaalka ayaa ka badan intii ku filan.
Shaashad iyo cod
Waxaan ku bilaabaynaa qorraxda, Echo Show 10-kan ayaa sifiican isu difaacaya, wuxuu leeyahay sedex inch neodymium woofer iyo tweeters hal-inji ah. Waxay si cad uga fog tahay Amazon Echo Studio, laakiin waxay bixisaa dhawaq ka yara wanaagsan Amazon Echo ee qarnigan. Dhexda iyo baaska waxyar baa la ixtiraamaa waxaana loo muujiyey inay tahay ikhtiyaar in ka badan oo ku filan oo lagu buuxiyo qol ama qol kasta, in kasta oo laga yaabo inay tahay tayo aan ku filnayn qolka caddaaladda deeqsinimada leh Waxaad ka iibsan kartaa Amazon, oo ah barta caadiga ah ee iibka, inkasta oo ay waliba ka muuqato qaar ka mid ah Warbaahinta MediaMarkt.
Waxaan leenahay waafaqid Dolby Atmos, dhalanroggu wuu hooseeyaa waxaana loo difaacay si sharaf leh. Sida iska cad waxay ku qaadaneysaa baasa, laakiin bartamaha iyo sare waxay leeyihiin tayo ku filan.
Sida shaashadda waxaan leenahay 10,1 inji oo guddi taabasho ah IPS LCD. Shaashadu waali maahan, waxaan leenahay a 1280 x 800 qaraar, ie HD, taas oo aan ku filneyn in lagu raaxeysto waxyaabo badan oo warbaahin ah sida ay u baahan yihiin buugaagta, waa wax laga xishoodo leh guddi 10 ″ ah. Annagu ma lihin nooc xiriir ah oo dibadda ah oo qaab ah kaydinta warbaahinta badan, sidaa darteed waxaan ku koobnaan doonnaa Sawirada Amazon ama adeegyada isku xidhka daruuraha ee qalabkani taageero.
Bandhiggan 'Amazon Echo Show' wuxuu mar labaad u adeegaa sidii kordhinta Alexa ee guryo isku xiran oo si caddaalad ah isugu xiran, inbadan ayaan ka helay isticmaalkeeda inkasta oo aysan bixin qayb kasta oo cusub oo ku saabsan Nidaamka Hawlgalka ee noocyada kale ee Amazon Echo Show mount. Waxaan haynaa qalab si wanaagsan uga jawaabaya oo noo oggolaanaya inaan hagaajino dhammaan cabbiraadaha aaladahaas horay loogu waafajiyay Amazon Alexa.
Xaaladdayda, dhammaan aaladaha IoT ee gurigeyga waxaa loogu talagalay oo ay la falgalaan Alexa, sidaa darteed waxay igu noqotay raaxo iyo dareen igu habboon inaan la shaqeeyo Philips Hue, qalabka Sonos iyo xitaa qaboojiyaha lagu qaabeeyey BroadLink. Dabcan, waxaan tixgelineynaa inaan wajaheyno qalab qiimahiisa caadiga ah uu ku dhow yahay 250 euro. Waxay u adeegi doontaa talaabo kale oo loogu talagalay aaladaha caadiga ah ee guryaha, iyo si daacadnimo ah, waxay ka dhigaysaa xakamaynta guriga ku xiran mid aad u dulqaadan kara mahadnaqkeeda shaashadda, inay tahay mid raaxo leh in lagu haysto jikada ama hoolka, laakiin way ka fog tahay qalab loogu talagalay kala duwanaanta qiimaha.
Echo Show 10 (2021)
Ku dhejiyay: 11 Juunyo 2021
Wax ka badalidii ugu dambeysay: 6 Juunyo 2021
Borotokoolka Zigbee iyo shaashad weyn
Xallinta waa la horumarin kari lahaa
Dhawaaqa uma dhigmo ku hadla 250 euro
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Amazon Echo Show 10, shaashad, cod iyo hal-abuurnimo, ma u qalantaa?
Echo Show 5 (2021) - Kaamirad iyo cod ka wanaagsan jiilkan cusub [DIB U EEGID]
Clam Elite, beddelaad leh ANC sharaf leh Fresh'n Rebel